Htet Yie, Author at Brand You Academy
LeaveaComment	/ Personal Development, Success / By Htet Yie
ကိုယ်ဝါသနာပါတာတစ်ခုတည်းနဲ့ ဘာမှ မသိ၊ နားမလည်၊ မတတ်တဲ့ နယ်ပယ်မှာ အလုပ်လုပ်တာ ၈ နှစ်လောက် ကြာတဲ့အခါ ကျွန်မ သေသေချာချာသိလာရတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ခုက ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို စိတ်ရင်းနဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကို judge မလုပ်ဘဲ လက်ခံပေးမဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီး ရိုက်မချိုးဘဲ ဘယ်လိုဝိုင်းကူညီရမလဲ ဆိုပြီး အားပေးတဲ့ community လေးတစ်ခုရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လူအနည်းအများနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ value တန်ဖိုးထားတာချင်း တူရမယ်။ ဘဝအပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေ ညှိလို့ ရရမယ်။ အမြဲကြိုးစားပြီး တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိတဲ့လူတွေ ဖြစ်ရမယ်။ မနာလိုစိတ်၊ ဝန်တိုစိတ်ကင်းတဲ့ လူတွေ ဖြစ်ရမယ်။ အပြောမဟုတ် တကယ် အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေ ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီ အစုအဖွဲ့လေး community …
“Empowering Community” Read More »
LeaveaComment	/ Mindfulness, Personal Development / By Htet Yie
ဟိုနေ့က အောက်စဖို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားတစ်ပုဒ်မှာ နာလိုက်ရပါတယ်။ Dr. Matthieu Ricard က Happiness ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားပါတယ် တဲ့။ လူတွေပျော်ရွှင်တတ်ခြင်း၊ မပျော်ရွှင်တတ်ခြင်းရဲ့ ၂၀-၂၅% က မွေးကတည်းက DNA ထဲ၊ Genes ထဲမှာပါလာပါတယ်တဲ့။ ဥပမာ – ခဏခဏ ဆဲတတ်တဲ့မိဘက သားသမီးကို အကျင့်ဆိုး လက်လွဲပြောင်းပေးတာ။ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ပညာတတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း၊ မပြေခြင်း စတဲ့ ပြင်ပအခြေအနေတွေက ၁၀-၁၅% ပါတဲ့။ မိမိရဲ့ ဘဝအပေါ် အမြင်၊ အဖြစ်အပျက်အပေါ်မှာ စိတ်ထားတတ်ခြင်းက ပျော်ရွှင်မှုအပေါ် ၆၀-၆၅% သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ အဆင်မပြေလို စိတ်ညစ်လို၊ စိတ်ပျက်လို၊ စိတ်ဓါတ်ကျလို ညည်းတော့မယ်ဆိုရင် အရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ …
ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ ခြောက်ဆယ့်ငါး ရာခိုင်နှုန်း Read More »
LeaveaComment	/ Personal Development / By Htet Yie
တစ်နေ့က ညီမလေးတစ်ယောက်ကို coaching လုပ်ရင်း ပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးပါ။ ကျွန်မကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားမှာ ငယ်ကတည်းက တူတူနေလာတဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း သေသွားလို မစားနိုင်မအိပ်နိုင် ဘာအလုပ်မှမလုပ်နိုင်ဘဲ depression ဝင်၊ ဆေးတွေသုံးနေတဲ့သားကို အဖေက လမ်းလျှောက်ခေါ်သွားပြီး ပြောပါတယ်။ “Life goes on, either you move on or you die” တဲ့။ ကျွန်မနားလည်တာက သေတဲ့သူကသေပြီ။ မင်းရှေ့ဆက်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစား မဟုတ်ရင် မင်းသေသာ သေလိုက်တော့.. တဲ့။ ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့ ကြမ်းတယ်ထင်ရတယ် သေလိုက် လိုပြောတာကိုး.. မြန်မာမှာဆို နိမိတ်မရှိ နမာမရှိလို ပြောကြမယ်မိုလား။ သိုသော် သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် အသက်သေပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီး လေးနက်ပါတယ်။ ဘဝသေသွားတာ…အိပ်မက်တွေ သေသွားတာ…အသုံးဝင်မှုတွေ သေသွားတာ…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှုတွေ သေသွားတာ…မိသားစုနဲ့ …
Life goes on…. Read More »
LeaveaComment	/ Personal Development, Uncategorized / By Htet Yie
ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခွင့်လွှတ်ဖို့က အခက်ဆုံးပါ။ များသောအားဖြင့် ငါ ကံဆိုးရတာ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘယ်ဝါ့ကြောင့် အပြစ်တင်တတ်ကြပေမဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ What’s wrong with me? ငါ ဘာများအမှားလုပ်ခဲ့မိလဲ၊ ဘယ်နေရာ မှားနေလိုလဲ၊ ငါပြောတာ မှားသွားပြီလား.. သိုမဟုတ် မပြောခဲ့မိတာများ မှားသွားလား..ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဝဲလည်နေတတ်ပါတယ်။ အတွေးတွေထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်လေလေ၊ အတိတ်သံသရာထဲမှာ ကျင်လည်နေရလေလေ ဖြစ်မှာပါ။ သူများကို သနားတတ်အောင် သင်ယူခဲ့ကြပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သနားတတ်ဖို့ အစကနေ ပြန်သင်ယူရတယ်။ သူတပါးအတွက် စဉ်းစားပေးဖို့၊ မျှဝေပေးဖို့ လွယ်ကူပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက် စဉ်းစားတတ်ဖို့ ပြန်သင်ယူရတယ်။ အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့သူကို ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ သိပ်မခက်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့ အများကြီး ပြန်သင်ယူရပါတယ်။ Learn – Unlearn …
Learning to Forgive…. Read More »
Let curiosity Alive
“Let curiosity alive even in the darkness & restrictions” ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ၊ ကြိုးစားနိုင်စွမ်း၊ ဖြစ်နိုင်စွမ်းတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်ခံရတဲ့ အဆိုးရွားဆုံးအချိန်မှာတောင် စူးစမ်းချင်စိတ်၊ သိလိုစိတ်၊ နည်းလမ်းရှာဖွေချင်စိတ်တွေကို မသတ်ပစ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆက်ပြီးရှင်သန်အောင် မွေးမြူပါ။ အခြေအနေအသစ်ဖြစ်လာရင် စူးစမ်းချင်စိတ်၊ သိချင်စိတ်၊ အဖြေရှာလိုစိတ်က အတွေးသစ်တွေကို ပေးမှာမို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် force လုပ်ပါ။ အဖြေရှာဖို စဉ်းစားပါ။ ငါ မမြင်သေးတဲ့ နည်းလမ်းတွေများ ရှိသေးလား၊ ငါ သိသင့်တာတွေ ရှိသေးလားလို အမြဲမေးနေပါ။ Let curiosity Alive ပါ။ ထက်ရည်
LeaveaComment	/ Mindfulness / By Htet Yie
အဲဒီလိုပြောလိုက်ရင် နားတောင်မနားရတော့ဘူးလား၊ တချိန်လုံးအလုပ်လုပ်နေရမှာလား လို့ ရုတ်တရက် တွေးမိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချိန်တိုင်းတကုပ်ကုပ်အလုပ်လုပ်နေဖို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရော လူရော အအားမနေဘဲ အကျိုးရှိတာ၊ ကိုယ့်အတွက် ကျေနပ်ရတာ တစ်ခုခုလုပ်နေဖို့ ပြောတာပါ။ အိမ်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်နိုင်သလို ကလေးကို အချိန်ပေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခဏလေး အနားယူတာဖြစ်နိုင်သလို အလှူအတန်းလုပ်တာ၊ ဘုရားရှိခိုးတာ၊ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်လေးတွေ လုပ်နေတာ၊ လမ်းလျှောက်ထွက်တာ၊ လူတွေကို ကူညီတာ… စသဖြင့် အများကြီးရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လုပ်စရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား၊ သို့မဟုတ် လုပ်နေရင်းနဲ့တောင် စိတ်က ပစ္စုပ္ပန်မှာမရှိဘဲ အတိတ်ကို တွေးနေတာ၊ အနာဂတ်ကို ပူနေတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူများကို အခြေအနေကိုလျှောက်ပြီး အပြစ်တင်နေတတ်ပါတယ်။ လူနဲ့စိတ်နဲ့ မကပ်တာတွေများလာတဲ့အခါ အဆင်ပြေတဲ့အရာတွေကို သတိမထားမိတော့ဘဲ အဆင်မပြေတာတွေ၊ ပူပန်စရာတွေကိုပဲ အထပ်ထပ်အခါခါတွေးနေတာမျိုး …
“ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မအားပါစေနဲ့” Read More »
ဘဝက ဘာတွေပဲ ကိုယ့်ကို ပေးနေသည်ဖြစ်စေ၊ လက်ရှိမှာ ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ရောက်နေသည်ဖြစ်စေ.. ငါ့ဘဝက တန်ဖိုးရှိတယ်၊ ဒီအခြေအနေကို အကောင်းဆုံး ကျော်ဖြတ်သွားရမယ်လို့ အမြဲတွေးပါ။ 🔸 ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေများနေလား? ပိုပြီး ကူညီနိုင်အောင် ကိုယ်ကျန်းမာရမယ်။ 🔸 မိသားစုထဲ စိတ်သောကရောက်စရာတွေပြည့်နေလား? ကိုယ်ကပိုပြီး အားတင်းထားရမယ်။ ပိုပြီး စိတ်မာရမယ်။ 🔸 Social Media မှာ negativity တွေ အရမ်းများနေလို့ စိတ်ထိခိုက်နေလား? ငါ့စိတ်ကို ဘယ်သူမှမပိုင်ဘူး လို့ တွေးပြီး ကိုယ့်စိတ်သန်မာလာအောင်၊ ခိုင်မာလာအောင် နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လေ့ကျင့်ရမယ်။ 🔸 စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်းဖြစ်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်ဖြစ်နေလား? လူဖြစ်လာတာသည် endless possibilities ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ …
“အကောင်းဆုံး ရှင်သန်နေပါ” Read More »
Fear-based or Love-based?
ကြောက်စိတ်အခြေခံနဲ့လား၊ မေတ္တာစိတ်အခြေခံနဲ့လား။ နေ့စဉ်တိုင်း အချိန်တိုင်း လုပ်သမျှအလုပ်တွေမှာ အခြေခံအကြောင်းရင်း ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။ အကြောက်တရားအခြေခံနဲ့လုပ်တာက ပိုများလေ့ရှိပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ ဘုရားရှိခိုးရင်တောင် ကံမကောင်းမှာ ကြောက်လို့ရှိခိုးတာ၊ သေသွားရင် ငရဲကျမှာကြောက်လို့ရှိခိုးတာ.. အခြေအနေအရ အထုတ်ပြင်ရင်တောင် ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြင်တာ.. ကလေးတွေကို စကားပြောရင် ကိုယ်မနိုင်မှာ၊ ကိုယ့်ကို အာခံမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်အခြေခံနဲ့ပြောတာက များပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ စာတင်တာတောင် ငါ့ကို တစ်ခုခု ပြောတော့မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာမှ မလုပ်နေဘူးလို့ ထင်ကြတော့မှာလား ဆိုတဲ့ အခြေခံနဲ့ တင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သွေးတဲ့ဓါးက ထက်တယ်ဆိုသလိုပါပဲ။ ကြောက်စိတ်အခြေခံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဦးနှောက်ရဲ့ ကြောက်တဲ့အပိုင်းက ပိုကြီးလာပါတယ်။ တုန့်ပြန်မှု ပိုမြန်ဆန်လာပါတယ်။ ကြာလာရင် မလိုအပ်ဘဲ sensitive ဖြစ်တာတွေ၊ အချိန်တိုင်း react တုန့်ပြန်မှုမြန်ဆန်လွန်းလို့ စိတ်ကို …
Fear-based or Love-based? Read More »
ကိစ္စတစ်ခုကို အဖြေရှာမရသေး၊ စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတာနဲ့ မနက်အစော ထပြီး လမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဖွဲဖွဲကျနေပေမဲ့ စဉ်းစားချင်တာကြောင့် သစ်ပင်အောက်မှာနေရင်း ကျေးဇူးတင်မိတာလေးတွေ ဖုန်းထဲ ချရေးဖြစ်ပါတယ်။ 💦 ဒီအချိန်မှာ အသက်ရှိနေသေးတာ.. နေစရာ စားစရာ ရှိနေသေးတာ.. 💦 ကိုယ် ဘာဖြစ်ဖြစ် နားထောင်ဖို့၊ ကူညီဖို့၊ အားပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေ သုံးလေးယောက်ရှိတာ.. 💦 မိုးက တအားကြီး ရွာမနေတာ.. 💦 ဖြတ်သွားတဲ့ အန်တီတစ်ယောက်က မိုးခိုနေတယ်မှတ်ပြီး ထီးနဲ့ အိမ်လိုက်ပို့ပေးရမလားမေးတာ… 💦 ငှက်ကလေးတွေရဲ့ အသံကြားနေရတာ၊ ကြားနိုင်ဖို့အတွက် နားကောင်းနေသေးတာ… (ကျွန်မအဖိုးက နားကျပ်မပါရင် ဘာမှ မကြားရတော့တာမို့ သူ့ကိုသတိရပြီး မေတ္တာပို့မိပါတယ်) 💦 မနေ့ညက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်တာ၊ ဘုရားရှိခိုးဖြစ်တာ.. 💦 ထမင်းဟင်းချက်စရာ မလိုတာ.. …
Gratitude Moments… Read More »
ဒီကြားထဲမှာ တရားသေချာလေးအားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Spirituality စာအုပ်တွေနဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်အလုပ်ကို အရင်တည်းက လုပ်လာပေမဲ့ အခုပိုပြီး သေသေချာချာလုပ်ကြည့်တဲ့အခါ အများကြီး အကျိုးရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ရတာမို့ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ Being Open Minded (စိတ်နှလုံးသားကို ဖွင့်ထားခြင်း) ဘယ်ဆရာ၊ ဆရာမဆီကနေပဲ ယူယူ၊ ဘယ်သူ့ရဲ့ လမ်းစဉ်ကိုပဲ လိုက်လိုက် စိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့၊ ကိုယ့်ဘဝအခြေခံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အရာလေးတွေကို ယူတဲ့အခါ အသစ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံရယ်၊ ကိုယ့်အခြေခံ အတွေ့အကြုံရယ် ပေါင်းစပ်ပြီး ဆပွား အကျိုးရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ငါပဲမှန်တယ် ဆိုတဲ့ အတွေးကို အချိန်နဲ့အမျှ သတိထားပြီး စွန့်လွှတ်တဲ့အခါ သင်ယူစရာတွေအများကြီး၊ ကိုယ်သိရမှာတွေ အများကြီးဆိုတာတွေ့လာရပါတယ်။ ၂။ Non-Judgmental …
My Spiritual Experiences Read More »